Iyelenqe likhona, kodwa andivumelani namaqhinga amaninzi enziwe kwizimvo. Bhengeza uYesu endaweni-uya kuphumelela ekuhambeni kwexesha!
Khange ndicinge ukuba zininzi iyelenqe kwi-Apg29 de intatheli esebenza kwiphephandaba iSändaren yandibiza ngoMvulo. Wayefuna ukwazi ukuba ndicinga ntoni ngamayelenqe kuba wafunda ukuba uninzi lwezimvo malunga nalo.
Ndiyabona kwicandelo lezimvo lizaliswe kakhulu malunga neethiyori zelenqe. Isiphumo kukuba abantu abathethi kangako ngoYesu. UYesu usibekelwe. Injongo yeApg29.nu kukuxelela ngendlela elula ngoYesu kwaye uya kusindiswa xa umamkela ngokholo.
Kodwa njengokuba kunjalo ngoku, umyalezo malunga noYesu ufihliwe zezi ngcamango zelenqe. Iinyani ziyinto enye, kodwa ithiyori ethathwa kuphela ngaphandle komoya omncinci ngaphandle kokubhekisa kwimithombo ethembekileyo ayihambelani apha kwi-Apg29 eyiphepha likaYesu-iphepha lokuhambisa ivangeli.
Ndizamile ukuphendula imibuzo yakhe kangangoko ndinako, kodwa ndizamile nokuhambisa umyalezo kaYesu Krestu ngokucacileyo. Ndilumke kakhulu ukungqina ngoYesu nosindiso olukuye. Olu lubizo lwam kunye nenjongo yesiza sebhlog. Ukuba andenzi njalo, ndihlukumeze umnxeba kaThixo kunye Apg29.nu ilahlekelwe raison d'être yayo.
Andazi ukuba ndikwazile ukuhambisa isimo sam sengqondo kwintatheli ukuba singoYesu, kodwa usenokuba wayenomdla kuphela kumayelenqe angaqhelekanga. Siza kubona xa inqaku lipapashwa kwiphephancwadi iSändaren.
Vecka 25, tisdag 22 juni 2021 kl. 06:42